QALABKA BASASHA: BEERITAANKA IYO DARYEELKA XAALADAHA CIMILADA EE SIBERIA - BOW
Sida loo koro baska qoyska Siberia
Basasha, kuwaas oo ku koray aaggooda, dukaanka aad u fiican. Laakiin waxa dhacaya haddii cimilada adag ee Siberia ma kuu ogolaanayso inaad hesho goosashada wanaagsan? In our article waxaan u sheegi doonaa dhowr sir ah oo ku saabsan sida loo abuuro iyo koraan basasha qoyska ee Siberia.
Noocyada ugu wanaagsan ee basasha Siberia
Liiska noocyada ugu wanaagsan ee suuqyada basasha for Siberia:
"Strigunovsky" - kala duwanaanta noocaas ah waa bilawga hore. Nalalka way wareegsan yihiin, waxay miisaankoodu ka noqon karaan 100 illaa 200 g Taqladdu maaha mid fiiqan. Kala duwanaanta noocaas ah ayaa si fiican loo hayaa. Haddii ay sii kordheyso qoyaanka qoyaanku kuma filna, miraha way yaryihiin iyo qadhaadh.
"Arzamas maxalli" - Tani waa noocyo kala duwan oo dhexdhexaad ah. Laga soo bilaabo biqilka ee jaka si aad u leexiso 80-100 maalmood. Basasha cufan waxay ka koraan 30 illaa 60 g. Tani waxay leedahay dhadhan adag.
Basasha "Sanad walba Siberian" - waxaa loola jeedaa noocyada hore ee Bisaylkiisa. Nalalaha waxaa lagu wareegayaa guri. Miisaanka qallafsan waa qalalan, jaale leh jilbis casaan. Nalalka kala duwan ee noocaan ah ayaa gaari kara 200 g oo kala duwan oo noocyo kala duwan ah ayaa loo arkaa salad.
"Bessonovsky maxaliga ah" - midho badan oo hore u kaca. Nalalka waxay ku koraan qiyaas ahaan 30 g, qaabkuna wuxuu noqon karaa labadaba wareega iyo guri.
Ma taqaanaa? Dunida waxaa jira in ka badan 400 nooc oo basasha ah. Qiyaastii kala bar iyaga ayaa ku koray Ruushka.
Shuruudaha ugu habboon ee degitaanka xaaladaha daran
Sevok ee Siberia beeray guga marka qallaylku uu kululeeyo ilaa 10 ° C. Tan waxaa badanaa la qabtaa dhammaadka Abriil - bilawg May, kahor 10aad.
Waa muhiim! Waa suurtagal in la gooyo basasha carrada aan wali la diirin - taasi waxay horseedi doontaa markasmanship-kaca.
Haddii aad dhashid sevok ka dambeeya taariikhahaas, ka dibna sabab u ah qoyaan hooseeya dalaggu wuxuu noqon doonaa mid xun.
Sevok waa inay ahaataa cabbirka isku mid ah. Waxyaabinta Beeraha waa inaysan lahayn qashin iyo basbaas cufan. Oo iyagu ma aha inay si weyn u soo biqin.
Ka hor inta beeritaanka basasha ee Siberia, waa lagama maarmaan in la diyaariyo goobta iyo wax laga beerto.
Basasha - dhaqanka iftiin-jecel, sidaas booska beerto waa in si fiican iftiin. Waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo goobta dayrta: dhufashada majarafadaha ku yaala xaydaanka iyo dhigista compost.
Waa muhiim! Waxaa fiican in aan ku dalban Bacriminta organic si ciidda guga ka hor beerto - tani waxay keeni doontaa inta kale ee qaybta hoose ee basasha, iyo kaliya qaybta kor ku xusan waxay horumarin doontaa.
Guga, sariirta waa in la bacrimiyo Bacriminta macdanta. Soo qaado hal digrii. m ammonium nitrate (15 g), superphosphate double (30 g), potassium sulfate (30 g). Haddii ciidda uu yahay acidic, lime dayrta ama ash alwaax ah ayaa lagu daraa (halkii 1 sq m M. 0.5 l).
Siyaabo kala duwan oo loo diyaariyo daroogada:
In 5 l oo biyo ah ku shub 2 tbsp. l cusbo. Xalka this, qoyan nalalka maalin. Taas ka dib, waxaa lagama maarmaan ah in la sii wado ilaa 15 daqiiqo. in xal fudud nalalka potassium. Ku rid dhulka oo aan qallajin.
Sevok waxaa loo kululeeyaa 10 saacadood oo biyo ah heerkul ah 40 ° C. Waa lagama maarmaan in mar walba ku dar biyo kulul. Ka dib markaa, waxaa lagu daaweeyaa kor u qaadayaasha kobcinta. Si looga hortago xakamaynta budhcadda, sevok waxaa lagu rusheeyaa xal of naxaas sulfate ama manganese.
Haddii aysan jirin wakhti aad ku diiriso nalalka, markaa waxaad ku daadi kartaa biyo heerkul ah 55 ° C ilaa 15 daqiiqadood kadibna isla markiiba biyo qabow isla waqti isku mid ah. Dheecaan dheeraad ah oo la nadiifiyo kaneecada.
Basasha ayaa la qalajiyey 10-20 maalmood 25 ° C si looga hortago caabuqyada fangas.
Ka hor inta beeritaanka noocyo kala duwan loo kala soocayo.
Dhexroorka tirokoobka ee ka yar 1 cm beeray fogaan ah oo ku saabsan 5 cm;
haddii nalalka 1.5 cm, ka dibna masaafada sii kordheyso 8 cm;
haddii dhexroorka basku ka badanyahay 2 cm, ka dibna waxaa lagu beeray masaafada 10 cm.
Waxay qoto dheereeyaan qiyaasta 4 cm, oo ka tago 20 cm inta u dhaxaysa safka si ay u sahlanaato in ay daryeelto.
Haddii aad leedahay jimicsi badan, marwalba way liidataa, waxaana jira halis cudur. Marka kolka laok ku riixo oo si cufan leh dhulka ugu foorarsado, waxaa lagama maarmaan ah in la daboolo sariiraha caws engegan, peat, sida balka.
Ma taqaanaa? Basasha waxaa ku jira sonkor dabiici ah oo ka badan kuwa isteroberi iyo tufaax.
Daryeelidda basasha uma baahna xirfado gaar ah.
Marxaladaha hore waxay u baahan yihiin waraabin joogto ah. Iyada oo ku xiran cimilada, biyaha dhirta hal mar toddobaadkii, adoo isticmaalaya 7 litir oo biyo ah 1 mitir labajibbaaran. m. Inta lagu jiro koriimada nalalka waraabinta waa in la dhimo. U fiirso muuqaalka dhirta: baalal-buluug-cad oo qulqulaya qarkood waxay muujinayaan la'aanta qoyaan, iyo caleemaha cagaaran caleemaha cagaaran waxay muujinayaan in badan. 2 toddobaad ka hor goosashada, waraabinta waa in la joojiyaa.
Baro naftaada adoo adeegsanaya agrotechnikada sii kordhaya ee noocyada noocyada basasha: beot, batun, slizuna, shnitta, caleenta.
Jeexitaanka iyo dabacsanaanta
Loosen sariiraha leh dalagga ka hor inta caleemaha u muuqday. Dhexdhexaadin 3 cm ciidda. Si aad u cufan cufnaanta ciidda aan la aasaasay, kharashka dabciyo 2 toddobaad kasta. Si aad uga takhalusto cawska ayaa ka caawin doona sariiraha dhirta caadiga ah.
Marka caleemaha 3-4 soo baxaan, markaa dhirta waxaa la quudin doonaa markii ugu horeysay. Safka safka waxaad ka sameysaa nitroammofosku (25 g halkii baali oo biyo ah). Ka dibna bacrimiya hal bil. Soo qaado superphosphate (20 g) iyo cusbo potassium (20 g), lagu qasi jiray baaldi biyo ah.
La dagaalanka cayayaanka iyo cudurada suurtagalka ah
Khatarta dhaawaca dhirta waa la dhimay haddii diyaargarowga habboon ee loo sameynaayo geedku. Marka uu cudurku muuqdo, waxaa lagu buufin karaa Bordeaux isku dar ah, oo la socdo mudadaas 2 toddobaad. Basasha ayaa la isticmaali karaa hal usbuuc kaddib marka la shaqeynayo. Marka duqsiyada basasha u muuqdaan, saf ayaa lagu daaweyn karaa xal milix ah oo sodium ah (100 g 10 litir oo biyo ah). Tani waxaa la sameeyaa marka dhirta ay gaaraan dherer ahaan 7-10 cm. Nidaamka waa in lagu celiyaa 4 maalmood kadib.
Iyagu way goosan doonaan markii baalasha cusubi ay joogsadaan si ay u koraan, iyo baadadihii hore u qallajin jireen oo ay bilaabaan in ay dhulka dusiyaan. Nadiifinta waxaa lagu fuliyaa cimilada qalalan.
Nalalka ayaa la qalajiyaa qorraxda, ka dibna qiiqa ku saabsan baaskiil. Waxaad ku keydin kartaa nalalka adoo qoortan qallajiyey. Goobta ugu keydsan waxay noqon doontaa aqallo iyo qolal hoose, halkaas oo heerkulka hawadu noqon doonto 0 ° C. Basasha waxaa badanaa la geliyaa sanduuqyo alwaax ah, boorsooyin ama naqshad.
Sanduuqyada waa inaysan aheyn mid qoto dheer. Heerka sare ee lakabka basal waa inuu ahaado 30 cm, sidaas awgeed khudradda waa la kaydin doonaa waqti dheer.
Basasha ayaa aad u mahadceliya: ka jawaabida daryeelkaaga, wuxuu siin doonaa goosasho deeqsi xitaa jawiga adag ee Siberia.